CSV Explorer: Miaraha miasa amin'ireo rakitra CSV lehibe | Martech Zone
Ny fisie CSV dia fototra ary matetika no ambany indrindra iraisan'ny fampidirana sy fanondranana angona avy amin'ny rafitra rehetra. Miara-miasa amin'ny mpanjifa iray izahay izao izay manana tobim-pifandraisana lehibe (5 tapitrisa firaketana) ary mila manivana, manontany ary manondrana subsegment ny data izahay.
Inona ny rakitra CSV?
A soatoavina nosarahana koma Ny rakitra dia rakitra an-tsoratra voafetra izay mampiasa koma mba hanasarahana soatoavina. Ny tsipika tsirairay amin'ilay rakitra dia rakitra firaketana. Ny firaketana tsirairay dia misy saha iray na maromaro, nosarahan'ny koma. Ny fampiasana ny koma ho toy ny mpampisaraka saha no loharanon'ny anarana ho an'ity endrika fisie ity.
Ireo fitaovana Desktop toa an'i Microsoft Excel sy Google Sheets dia misy fameperana angona.
Microsoft Excel dia hanafatra ireo angon-drakitra misy andalana 1 tapitrisa sy tsanganana tsy voafetra ao anaty takelaka. Raha manandrana manafatra mihoatra noho izany ianao dia mampiseho fampandrenesana i Excel izay milaza fa notapahina ny datao.
Nomery paoma dia hanafatra ireo angon-drakitra misy andalana 1 tapitrisa sy tsanganana 1,000 ao anaty takelaka. Raha manandrana manafatra mihoatra izany ianao dia mampiseho fanairana ny Nomery izay milaza fa notapahina ny angon-drakitrao.
Google Sheets dia hanafatra angon-drakitra miaraka amina sela 400,000, miaraka amin'ny tsanganana 256 farafahakeliny isaky ny ravina, hatramin'ny 250 MB.
Noho izany, raha miasa amin'ny rakitra be dia be ianao dia tsy maintsy manafatra ny angon-drakitra ao anaty tahiry ianao. Izany dia mitaky sehatra database ary koa fitaovana fangatahana hampizarazara ny angona. Raha tsy te hianatra fiteny fangatahana sy sehatra vaovao ianao… misy safidy hafa!
CSV Explorer dia fitaovana an-tserasera tsotra izay ahafahanao manafatra, manontany, manaparitaka ary manondrana angona. Ny kinova maimaim-poana dia ahafahanao miasa miaraka amin'ireo laharana 5 tapitrisa voalohany vonjimaika. Ny kinova hafa dia mamela anao hanana tahiry angona hatramin'ny 20 tapitrisa andalana izay afaka miasa miaraka aminao.
Afaka nanafatra firaketana 5 tapitrisa mahery aho androany tao anatin'ny minitra vitsy, nangataka mora foana ny angona, ary nanondrana ireo firaketana nilaiko. Niasa tsy nisy kilema ilay fitaovana!
Anisan'izany ny CSV Explorer
Data lehibe (na lehibe) - Andalana vitsivitsy na andalana tapitrisa vitsivitsy, CSV Explorer dia manamboatra haingana sy mamakafaka ireo rakitra CSV be dia be.
fitaovana - Ny CSV Explorer dia tsotra ampiasaina. Amin'ny tsindry vitsivitsy, sivana, karohy ary alao ny angona mba hahitanao ny fanjaitra ao anaty fitoeran-javaboary na hahazoana ny sary lehibe.
Export - CSV Explorer dia ahafahanao manontany sy manondrana rakitra - eny fa na dia ny manasaraka ireo rakitra aza dia isan'ny isan'ny firaketana tadiavinao isaky ny misy.
Alao sary an-tsaina sy ampifandraiso - Plot data, tahirizo ny kisary ho an'ny fampisehoana, na ampitao any Excel ny valiny raha hamakafaka fanampiny.
Manomboha amin'ny CSV Explorer
Tags: sanda nisaraka komaCSVMpikaroka ny CSVDataExcelGoogle Sheetsdatasets lehibe
Hopin: Toerana virtoaly hitarihana fifandraisana amin'ny hetsika an-tserasera